Egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ezinụlọ | Nye m oge ntụrụndụ
Isaac | 17/12/2021 17:47 | Emelitere ka 21/12/2021 09:02 | General
Ihe ole na ole dị mma karịa iwepụta oge gị na ndị ị hụrụ n'anya, gị na onye òtù ọlụlụ gị, ezinụlọ gị, ma ọ bụ ụmụ gị. Na-emefu ụbọchị, ehihie na abalị na-egwu egwu n'ụlọ na-ahapụ ụfọdụ n'ime oge kachasị echefu echefu nke a ga-echeta. Na nke a ga-ekwe omume, ị ga-achọ ụfọdụ n'ime egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ezinụlọ. Nke ahụ bụ, egwuregwu bọọlụ na-amasị onye ọ bụla, ụmụaka, ndị nọ n'afọ iri na ụma, ndị okenye na ndị agadi.
Otú ọ dị, n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke egwuregwu dị na otú o si sie ike ime ka onye ọ bụla nwee mmasị na ya, ọ bụghị ọrụ dị mfe ịhọrọ. Ebe a anyị na-enyere gị aka ime ya, na ụfọdụ ndị kasị mma na-atụ aro, na kacha ere na fun kedu ihe ị ga-ahụ...
1 Egwuregwu bọọdụ kacha mma iji soro ezinụlọ gwuo
1.1 Diset Party & Co Ezinụlọ
1.2 Ezigbo ezinụlọ na-achụso ezinụlọ
1.4 Ọganihu ezinụlọ
1.6 Hụ n'anya na mkpụrụ okwu Ezinụlọ
1.7 Bizak Ụmụaka megide nne na nna
1.8 Akụkọ ifo juru eju
1.9 Bang! Egwuregwu Wild West
1.10 Ndị ọbịa na-adịghị mma
2 Egwuregwu bọọlụ ị ga-egwu dị ka ezinụlọ
2.1 Egwuregwu Gbanyụọ Ndị agha nke duels isi na isi
2.3 cubes akụkọ
3 Kedu otu esi ahọrọ ezigbo egwuregwu bọọlụ ezinụlọ?
Egwuregwu bọọdụ kacha mma iji soro ezinụlọ gwuo
E nwere ụfọdụ egwuregwu bọọdụ a ga-egwu dị ka ezinụlọ bụ́ ndị so na ndị a ma ama. Ezi ọrụ nka nke ntụrụndụ na ntụrụndụ iji soro ndị ị hụrụ n'anya nọrọ oge kacha mma na nke na-enwekarị afọ dịgasị iche iche, na mgbakwunye na ịnakwere nnukwu ìgwè ndị egwuregwu. Ụfọdụ ndokwa bụ:
Diset Party & Co Ezinụlọ
Nsogbu - Party & Co Ezinụlọ ...
Ọ bụ pati kpochapụwo, mana na mbipụta pụrụ iche maka ezinụlọ. Kwesịrị ekwesị site na afọ 8. N'ime ya ị ga-emerịrị ọtụtụ ule mgbe oge gị ruru, enwere ike ịkpọ ya na otu. Na-eṅomi, see, ṅomie, zaa ajụjụ, ma nyefee ajụjụ ọchị. Ụzọ isi meziwanye nzikọrịta ozi, ịhụ anya, egwuregwu otu, na imeri ihere.
Ezigbo ezinụlọ na-achụso ezinụlọ
Egwuregwu bọọdụ dị obere ...
Egwuregwu dabara adaba maka afọ niile site na afọ 8. Ọ bụ egwuregwu ajụjụ na azịza kpochapụ, mana na mbipụta ezinụlọ, dịka ọ gụnyere kaadị maka ụmụaka na kaadị maka ndị okenye, yana ajụjụ 2400 nke ọdịbendị n'ozuzu iji nwalee ihe ọmụma gị. Na mgbakwunye, a gụnyere ihe ịma aka Showdown.
Egwuregwu Mattel -...
Ha nwere ike igwu egwu niile site na afọ 8, na-enwe ike igwu egwu site na ndị egwuregwu 2 ruo 4 ma ọ bụ mee otu egwuregwu. Ọ bụ otu n'ime egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ezinaụlọ, onye ebumnuche ya bụ ịkọpụta otu okwu ma ọ bụ ahịrịokwu site na foto. Gụnyere bọọdụ ọcha, ihe nrịbama, kaadị ndeksi, bọọdụ, elekere oge, dice na kaadị 720.
BOOM EZINỤLỌ - Egwuregwu nke ...
Ezinụlọ niile nwere ike itinye aka na egwuregwu a kpochapụrụ. Kaadị 300 dị iche iche na nke na-atọ ụtọ, bọọdụ, dị mfe igwu egwu, nwere ihe ịma aka, omume, ilu ilu, ịkwa iko, ntaramahụhụ maka aghụghọ, wdg. Ụzọ mara mma iji kpokọta ndị ị hụrụ n'anya ma nwee ọmarịcha oge.
Zụrụ ọganihu ezinụlọ
Repos Mmepụta-echiche ...
Ezinụlọ ahụ dum nwere ike igwu egwu, akwadoro site na afọ 10. Ọ bụ egwuregwu na-atọ ụtọ ma dị egwu nke ị na-azụlite okike na echiche gị iji dozie mgbagwoju anya. Onye ọkpụkpọ ga-ejikọta akara ngosi ma ọ bụ akara zuru ụwa ọnụ iji nwaa ime ka ndị ọzọ chepụta ihe ọ bụ (edemede, aha, ihe, ...).
Hụ n'anya na mkpụrụ okwu Ezinụlọ
Egwuregwu maka ndị na-eto eto na ndị agadi, igwu egwu dị ka ezinụlọ ma nyere aka wusie njikọ dị n'etiti ndị sonyere. Ezubere ka ọ na-amasị ụmụ ụmụ, nne na nna ochie, nne na nna na ụmụaka, na-enyere ha aka inwe ezigbo oge na kaadị 120 nwere ajụjụ na-atọ ụtọ na nhọrọ ndị na-eduga na isiokwu mkparịta ụka dị iche iche.
Jiri okwu zụta ịhụnanya
Bizak Ụmụaka megide nne na nna
Egwuregwu bọọdụ ọzọ kacha mma maka ezinụlọ, yana ajụjụ na ihe ịma aka maka ndị otu niile. Onye meriri ga-abụ onye ga-ebu ụzọ gafee bọọdụ ahụ, mana maka nke ahụ ị ga-enwerịrị ajụjụ ndị ahụ. A na-egwu ya n'ìgwè, na ụmụaka na-emegide nne na nna, ọ bụ ezie na a pụkwara ịme ìgwè ndị agwakọta.
Ịzụ ụmụaka megide nne na nna
Akụkọ ifo juru eju
N'egwuregwu bọọlụ ezinụlọ a, onye ọkpụkpọ ọ bụla na-arụ ọrụ dị ka anụmanụ juru eju nke ga-azọpụta nwa agbọghọ ha na-asọpụrụ, n'ihi na ihe ọjọọ na ihe omimi tọọrọ ya. Akwụkwọ akụkọ gụnyere ga-arụ ọrụ dịka ntụzịaka maka akụkọ na usoro ị ga-eso na bọọdụ ...
Zụrụ akụkọ ifo juru afọ
Bang! Egwuregwu Wild West
Egwuregwu kaadị na-eweghachi gị azụ n'oge Wild West, n'okporo ámá uzuzu nke nwere duel na ọnwụ. N'ime ya, ndị omeiwu ga-eche ihu megide sheriff, sheriff megide ndị omeiwu, na ndị nnupụisi ga-ewepụta atụmatụ nzuzo iji sonyere ọ bụla n'ime bamdos ...
Ndị ọbịa na-adịghị mma
Egwuregwu nke a ga-enwe ndị ọbịa jọgburu onwe ya, ezinụlọ ndị omempụ, na nnukwu ụlọ. Kedu ihe nwere ike ịgahie? Nke a bụ egwuregwu kaadị Gloom, nke na-abịa dị ka mgbasawanye na egwuregwu bụ isi.
Ịzụta ndị ọbịa na-adịghị mma
Egwuregwu bọọlụ ị ga-egwu dị ka ezinụlọ
Mana ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ịga n'ihu ntakịrị wee chọta egwuregwu bọọlụ kacha atọ ọchị ka ị kwụsị ịchị ọchị, ịkwa akwa na ọchị na ime afọ gị imerụ ahụ, lee ndị ọzọ. aha ga-eme ka ị nweta oge kacha mma:
Egwuregwu Gbanyụọ Ndị agha nke duels isi na isi
Egwuregwu bọọlụ ezinụlọ dabara adaba maka afọ niile, nke emepụtara maka ndị asọmpi na ndị nkatọ. Ọ nwere duel 120 pụrụ iche iji soro ndị ikwu gị mee ihu na ihu. N'ime ha ị ga-egosipụta ike gị, chioma, obi ike, ikike iche echiche ma ọ bụ nke anụ ahụ. A na-eme duels ngwa ngwa ma na-atọ ụtọ, ebe ndị egwuregwu ndị ọzọ na-eme ka ndị juri na-ekpebi onye meriri. Ị amaja?
Otu n'ime egwuregwu kachasị amasị ezinụlọ nke ha ga-eji nwalee ndidi gị, nkwurịta okwu na ike ịnyefe site na nmimi. Ọ dabara maka ụmụaka, ndị nọ n'afọ iri na ụma na ndị okenye. Onye ọ bụla ga-enwe mmasị igwu egwu na imekọrịta ihe. Ọ gụnyere kaadị 250 nke ụdị dị iche iche ma ị ga-eme ka ndị ọzọ chepụta ihe ịchọrọ igosipụta site na mmegharị ahụ.
Asmodee- Cubes Akụkọ ...
Egwuregwu a bụ maka ndị nwere mmasị ichetụ n'echiche, imepụta na ịkọ akụkọ na-atọ ụtọ. O nwere dice 9 (ọnọdụ, akara, ihe, ebe, ...) nke ị nwere ike ịtụgharị ihe karịrị nde 1 maka akụkọ ị ga-emepụta dabere n'ihe ị nwetara. Kwesịrị ekwesị maka afọ 6 na karịa.
Egwuregwu Hasbro - Twister ...
Egwuregwu ọzọ kacha mma maka ntụrụndụ ezinụlọ. O nwere akwa akwa nwere agba ebe ị ga-akwado akụkụ ahụ nke egosiri na igbe roulette ebe ị rutere. Ngosipụta ahụ ga-abụ ihe ịma aka, mana ọ ga-eme ka ị chịa ọchị.
Egwuregwu Cocktail- Ugha...
Egwuregwu kaadị maka ezinụlọ dum, dabara maka afọ 7+. N'ime ya ị na-abanye n'ime akpụkpọ ụkwụ nke agbụrụ ndị ọgba aghara tupu akụkọ ihe mere eme, onye ọ bụla na-egwu egwu ga-emeghachikwa usoro mkpọtụ na mkpesa dịka kaadị ndị na-apụta na ebumnuche nke ịghọ onye ndu ọhụrụ nke ezinụlọ. Ihe dị aghụghọ banyere egwuregwu a bụ na ị ga-eburịrị ụda ma ọ bụ omume nke kaadị ndị ga-eji nwayọọ nwayọọ na-agbakọta ma ị ga-egwu ha n'usoro ziri ezi ...
Zụrụ Ugha Bugha
Devir - Ubongo, egwuregwu nke ...
Ubongo bụ otu n'ime egwuregwu kacha atọ ụtọ maka ezinụlọ dum, nke akwadoro maka ndị gafere afọ 8. Ndị na-emepụta ya na-emesi obi ike na ọ na-agba ọsọ n'ihi otú ndị egwuregwu ga-esi gbalịsie ike itinye akụkụ ahụ n'ime otu ha n'otu oge; ọ na-eri ahụ n'ihi na mgbe ịmalitere ị gaghị enwe ike ịkwụsị; na mfe n'ihe gbasara iwu ya.
Kedu otu esi ahọrọ ezigbo egwuregwu bọọlụ ezinụlọ?
Ka ịhọrọ nke ọma egwuregwu bọọlụ ezinụlọ kacha mma, ekwesịrị iburu n'uche nkọwa ụfọdụ dị mkpa:
Ha kwesịrị inwe usoro mmụta dị mfe. Ọ dị mkpa na ndị na-arụ ọrụ nke egwuregwu dị mfe nghọta maka ma ndị na-eto eto na ndị agadi.
Ha kwesịrị ịbụ ndị na-adịghị agafe agafe dị ka o kwere mee, n'ihi na ọ bụrụ na ha na-ejikọta na oge gara aga ma ọ bụ ihe ụfọdụ nke oge a, ụmụaka na ndị agadi ga-efunahụ ntakịrị.
Ma, n'ezie, ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ maka onye ọ bụla, na-enwe isiokwu dị iche iche na-abụghị nke ndị na-ege ntị kpọmkwem. Na nkenke, nwee ọtụtụ afọ akwadoro.
Ọdịnaya ga-abụrịrị maka ndị niile na-ege ntị, ya bụ, ọ gaghị ejedebe naanị ndị okenye.
N'ịbụ ndị maka ezinụlọ dum, ha kwesịrị ịbụ egwuregwu nke ị nwere ike itinye aka na otu ma ọ bụ nke na-anabata ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-egwu egwu ka onye ọ bụla ghara ịhapụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » General » Egwuregwu bọọdụ kacha mma maka ezinụlọ